Akaakuu Taattoo XY
Akaakuu Taattoo XY (Bittimfaa)s
Taattoon XY unkaa bu`uura isaa keessatti deetaa walfaannee maqaa, tarree gatiiwwaan‑x, fi tarree gatiiwwan‑y ofkeessatti qabatu tokko irratti hundaa`a. Tokko tokkoon gatii dachaa (x|y) cirna walgita keessaatti akka tuqaati agarsiisama. Maqaan deetaa walfaannee gatiiwwan‑y waliin firooma akkasumas waayoo keessatti agarsiisama.
Taattoo XY fakkeenya hojoolee armaan gadiif fili:
ulaagaa qonyoo uumi, fakkeenyaaf mari
faankishinii caatoo fakkasi
aloolaa jijjiiramaawwan hangaa firoomina xiinannoo
Taattoon XY kee tarii deetaa walfaannee tokkoo ol qabaachuu danda`a.
Addaba'oota Taattoo XY
Fuula duraa Taattoo Masaka irraa, ykn Dhangii - Akaakuu Taattoo taattoof gulaalaa haalata keessaa filuudhaan taattoo XY addaa filuu ni dandeessa.
Qaaqa Deetaa Walfaannee banuuf tuqaa deetaa kamiyyuu lama cuqaasi. Qaaqa kana keessatti, amaloota baay'ee deetaa walfaannee jijjiiruu dandeessa.
Taattoowwan 2D dhaaf, agarsiisa kabalawwan dogongoraa dandeessisuuf saagi - Kabalawwan dogongoraa Y filachuu dandeessa.
Ajajoota baafata Saagi gargaaramuun sararoota gatii gidduu galeessaa fi sararoota adeemsa agarsiisu dandeessa.
Addaddummaan kunsararoota sirrii tuqaa deetaa tokko irraa gara itti aanuutti fakkaasa.Tuqaaleen deetaa sajooleetiin hin agarsiisaman.
Tartiibni fakkasa tartiiba deetaa walfaannee keessaa waliin walfakkaata.Tartiiba gatiiwwan x keessatti sararoota kaasuuf Gatiiwwan x Tartiiba qabsiisi mallatteessi. Tartiiba qabsiisiin taattoo qofatti fayyadama, deetaa gabatee keessaatti miti.
Tuqaalee fi Sararoota
Addaddummaan kun tuuqaalee fi sararoota sa`a walfakkaataa irratti agarsiisa.
Sararootni akka teeppiitti agarsiifamu.Tuqaaleen deetaa sajooleetiin hin agarsiifamani. Amaloota kan akka calaqqee fi mul`isu kofa qindeessuuf xumura taattoo keessaa 3D Mul`isi fili.
Bal'ina qonyootaaf qindeessuuf Amaloota cuuqaasi.
Cubic Spline tuqaalee deetaa keessaan pooliynomiyaalii digiriii 3 waliin walqabsiisa. Cehumsi kutaalee pooliynoomiyaalii simeessa, irraagadee fi qonyoowwan walfakkaatan qabu dha.
Qulqullini pooliynoomiyaali xixiqqooo tuuqaalee deetaa gidduutti kaasuuf muraaleen sarara hammam akka herregaman murteesa. Osoo tuqaa deetaa kamiyyuu cuuqaaste giddugaleessa tuqaalee ilaaluu ni dandeessa.
Title is: Akaakuu Taattoo XY